जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले डाक्याे साधारण सभा, बुकक्लाेज कहिले ? - Laganikhabar
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले डाक्याे साधारण सभा, बुकक्लाेज कहिले ?
मंगलबार, ०३ जेठ २०७९, १२ : ५९ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडाैँ - जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेकाे छ । संस्थाकाे जेठ १ गते, आइतबार बसेकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले गरेकाे निर्णय अनुसार संस्थाकाे तेश्राे वार्षिक साधारण सभा जेठ २८ गते, शनिबार बुटवल, रूपन्देहीमा हुनेछ ।
संस्थाले आर्थिक वर्षको २०७७/७८ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएकाे छ । त्यसैले, संस्थाका सेयरधनीहरूकाे हात खाली हुनेछ ।
संस्थाले साधारण सभा प्रयाेजनका लागि जेठ १२ गते, बिहीबारदेखि जेठ २८ गते, शनिबारसम्म बुकक्लाेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । त्यसैले, जेठ ११ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा काराेबार भई कायम भएका सेयरधनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन् ।